Zimbabwe's Mawarire Charged with Subversion, Held Indefinitely - allAfrica.com
Pastor Evan Mawarire known for his #This Flag Movement has reporterdly been arrested after he spoke out on social media on Zimbabwe's worsening economic crisis. This is not the first time he is arrested for speaking out on soial media, in 2016 he urged Zimbabweans to rise up against President Robert Mugabe's government which led to his first arrest.
Pastor Evan Mawarire speaks out on Zimbabwe's worsening economic crisis. see more »
New Zimbabwe, 24 September 2017
PASTOR Evan Mawarire was Sunday afternoon charged with subverting a constitutional government before being locked up indefinitely, his lawyer told New Zimbabwe. Read more »
The United States has urged Zimbabwe to end arbitrary arrests and intimidation of political players as the country braces for the trial of prominent preacher Evan Mawarire for… Read more »